Abavelisi beeNja zokuThengisa inja | Umzi-mveliso weChina Inja Leash
Ityala le-Extra Bungee Retractable Dog Leash lenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ze-ABS + TPR, ukuthintela ukuqhekeka kwetyala ngokuwa ngengozi.
Songeza ngokudibanisa i-leash ye-bungee leash eyenzelwe ukurhoxisa inja. Uyilo oluyingqayizivele lwe-bungee luyanceda ukufunxa ukothuka kwentshukumo ekhawulezayo xa isetyenziswa nezinja ezinamandla nezisebenzayo. xa inja yakho isusa ngesiquphe, awuyi kufumana umothuko wethambo, kwaye endaweni yoko, ifuthe le-bungee leelastic leash liza kunciphisa ifuthe engalweni nasegxalabeni.
Icandelo elibaluleke kakhulu kwi-leash ehoxiswayo yintwasahlobo. I-Bungee eyongezelelweyo yeRussian Dog Leash enentshukumo eyomeleleyo yasentwasahlobo yokurhoxa kakuhle, ukuya kuthi ga kuma-50 000 amaxesha. Ilungele inja enkulu enamandla, uhlobo oluphakathi kunye noluncinci.
4.Extra Bungee Retractable Dog Leash ikwanayo ne-360° I-leash yasimahla yezilwanyana zasekhaya enika inkululeko engakumbi kwizilwanyana ezifuywayo ukuba zijikeleze kwaye awuyi kuzisonga ekukhokeleni.
Kuyanceda ukuba ubambelele kamnandi kamnandi, kwizinja ezinkulu ezitsalayo kwaye zibaleke.
Umsebenzi onzima wentwasahlobo yeli siko linokutsala inja inokufumana ngokulula izinja ezinamandla ukuya kuthi ga kwi-110 lbs.
Inwebu yeenja ehlawulelwayo ebuyiswayo yenziwa ngentambo eyonyuselweyo enokuthi inyamezele ukutsalwa zizinja okanye iikati ukuya kuthi ga kwi-44lbs ngokobunzima.
I-leash yokurhoxisa inja ethengisa ngokubanzi iyokufikelela kwi-3m, inokuthwala ukutsala ukuya kwi-110lbs.
Leash yokurhoxa inja ethengisa yonke into ine-ergonomic handle design, ivumela ukuhamba ixesha elide ukhululekile, kwaye akukho xhala malunga nokwenzakalisa isandla sakho. Ngaphandle koko, kunjalo'ukukhanya kwaye kungatyibiliki, ngenxa yoko awuzukuziva udiniwe okanye uvutha emva kokuhamba ixesha elide.
I-1.Izixhobo zeLeash eRhwebayo kwiiNja ezincinci zicocekile, azinetyhefu kwaye azinavumba. I-leash ibonelela ngobomi obude ukuba busetyenziswe, kwaye isiphelo esomeleleyo se-High-End senza ukuba i-leash yandise kwaye iphinde ibuye kakuhle.
2.Ukuhlala kwe-ABS enomtsalane kunesiphatho se-ergonomic kunye nesiphatho sokuthintela isiliphu, intle kakhulu kwaye iyangena entendeni yesandla sakho, ilingana nesandla sakho njengeglavu. Uyilo oluchaseneyo lokutsala izinja ezincinci luqinisekisa ukhuseleko, kwaye uhlala ugcina izinto ziphantsi kolawulo. 3.Sturdy yesinyithi snap hook ikhuselekile inamathela kwikhola yezilwanyana okanye ihashe.